Tsara Indrindra Maimaim-Poana Ny Firaisana Ara-Nofo Amin'ny Chat Toerana Maimaim - Poana Amin'ny Chat Roulette
Tsara Indrindra Maimaim-Poana Ny Firaisana Ara-Nofo Amin’ny Chat Toerana Maimaim — Poana Amin’ny Chat Roulette
Ny firaisana ara-nofo amin’ny chat toerana natao ho an’ny mpampiasa Aterineto manerana izao tontolo izao. Tsy teny tokana olana dia mitsangàna (firenena miteny anglisy dia tsy voafetra ihany grande-Bretagne ary ny USA ihany, fa koa any ivelany). Tsy isalasalana fa ny firaisana ara-nofo amin’ny chat toerana manana ny lalàna sy ny fitsipika mifehy ny fitondran — tena tsy nisafotofoto, milamina sy fifandraisana efa nisy fetrany ny fandeferana. Ompa, ny fihetsika maneho fahambanian-toetra, indecency dia tsy ny toerana, saingy mahafinaritra, hehy, hatsikana, mampihomehy sy tantara ary ny zava-nitranga, mizara ny zavatra niainany, dia hahita marimaritra iraisana sy ny tombontsoa iombonana — izany rehetra izany dia omena ho anareo raha ny momba ny maimaim-poana ny firaisana ara-nofo amin’ny chat toerana. Ny serasera amin’ny aterineto no manan-danja avy amin’ny minitra voalohany mba ho vokany tsara, mba haneho ny tsara indrindra side mba hahazo valiny. Anjara asa manan-danja ao amin’ny izany-hilalao sy endrika: akanjo, malina makeup, tsara-groomed hoditra, volo, sns. Izany tsy midika fa tsy maintsy ho vonona ny hifandray amin’ny maimaim-poana ny firaisana ara-nofo amin’ny chat toerana ho fandraisana ofisialy na ara-tsosialy ny zava-nitranga sy hanafina ny momba azy, fa neatness sy.
Dia tsara fa ny fototra sy ny tsy fampisehoana an-tsirambina izany: araka izay azo atao, dia mendrika kely milamina ny efitra. Ny ankizivavy dia tsy tokony ho ampiharina amin ‘ny ady loko’ — be diso eyelashes, jaky molotra sy ny hafa ny tetika. Raha manana olana miaraka amin’ny hoditra, mampiasa concealer, vovoka sy ny fanitsiana dia midika hoe. Amin’ny firaisana ara-nofo amin’ny chat toerana, manao zavatra sy mitondra tena ho azy, fa hihaino tsara ny interlocutor: aza tapahina ny teniny, ndeha hamita ny hevitra, ny manontany ny fanontaniana momba ny fialam-boly sy ny tombontsoa, ary tsy mikatona sy ny matoantenin’ny atao. Tsiky, hehy, ary lazao mampihomehy tantara no mahatonga ny voajanahary kokoa ny fihetseham-po anao hampiseho, arakaraka ny haingana endeared ny tenanao ny interlocutor. Angamba amin’ny voalohany ny karajia dia ny hahatonga ny sasany zava-tsarotra indrindra mikatona sy saro-kenatra ny olona, fa rehefa mandeha ny fotoana, ny kokoa ianao dia hihaona sy hiresaka, ny tsy ara-tsaina ny sakana dia hitsangana. Fa izany tsy ny rehetra, ry lahy sy vavy, dia nandeha dingana iray lavidavitra kokoa ary natao ho anareo ny fahafahana mampiasa ny miaina ny firaisana ara-nofo amin’ny chat toerana ao amin’ny misaraka varavarankely, tsy misy isan-karazany toolbars and levitra. Izany dia manome fahafahana ambony indrindra kely, ary tamim-pahendrena ny fampiasana tsara indrindra ny firaisana ara-nofo amin’ny chat toerana.
Dia manoro hevitra anao mba miezaka ny safidy ity
Ianao foana ny tonga soa eto amin’ny ny maimaim-poana ny firaisana ara-nofo mifampiresaka toerana, ary manantena izahay fa ianao tena ho tia ny fiaraha-monina ary lazao ny namanao ny momba ny maimaim-poana amin’ny velona ny firaisana ara-nofo amin’ny chat toerana
← Mampiaraka ny lahatsary amin'ny chat